Izindaba - Ngaphezu kwentengo, yiziphi ezinye izinto okufanele zicatshangelwe lapho uthenga i-jammer yesiginali?
Ngaphezu kwentengo, yiziphi ezinye izinto okufanele zicatshangelwe lapho uthenga i-jammer yesiginali?
Izici okufanele zicatshangelwe ekukhetheni kwesisetshenziswa se-mobile phone jammer Equipment:
Ukukhethwa kwesiginali yomakhalekhukhwini kukulungele. Ungathembi noma yimiphi imikhiqizo emikhulu. Intengo akuyona into eyinhloko nayo. Ukuthi i-jammer yesiginali yeselula ifanelekile kungabonakala kwizitifiketi ezahlukahlukene zenkampani, izinto ezisetshenzisiwe, kanye nokulungisa ubuchwepheshe bokucubungula. Kunezidingo ezithile eziyisisekelo zokukhetha i-jammer yesiginali yeselula. Uma kukhona ukubhaliswa kwenkampani okusemthethweni, noma ngabe kukhona uphawu lwentengiso olubhalisiwe, njll., Ungacela umenzi ukuthi ahlinzeke ngesithombe sokulungisa iphutha lesiginali yomakhalekhukhwini, izithombe zesakhiwo sangaphakathi, njll. Konke kufanele ukwahlulela isignali yocingo lomakhalekhukhwini imigomo eyisisekelo . Kusukela ezithombeni ezilungisa amaphutha, kungabonakala ukuthi imvamisa yesiginali yomakhalekhukhwini iyisikwele futhi kukhona imfuhlumfuhlu, noma ngabe amandla obubanzi bokulungisa amaphutha wemvamisa afanelekile, kuyiqiniso yini ukuthi kunemiphumela emi-5 kokukhishwa okungu-8 ngaphandle, futhi kutholakala ukuthi abathengisi abaningi abangathembekile emakethe baheha amakhasimende ngamanani aphansi. Ngale ndlela, ngalezi zindlela ezingenhla, okungenani kungahlulelwa ukuthi ayakhiqizwa emafemini amancane nakuma-workshop amancane, futhi ikhwalithi iqinisekisiwe.
Ungaqhathanisa kanjani umsebenzi wepharamitha yedivayisi evikelayo:
Uma uthenga i-mobile phone signal jammer device, ungaqhathanisa imingcele nemisebenzi yedatha yokulungisa iphutha ukuze ubone ukuthi ungayivikela yini i-CDMA / GSM / DCS / PHS / 3G / 4G yeselula evikela isignali kuyo yonke i-frequency band. Noma ngabe isiteshi ngasinye sinezinto ezanele eziphumayo, vele, ukukhishwa kweziteshi eziningi, kuba ngcono umphumela wokuvikela. Umhlaba mkhulu, futhi opharetha bezokuxhumana ezweni ngalinye nabo bahlukile, futhi namazinga wenethiwekhi amukelwa ezifundeni ezahlukahlukene nawo ahlukile. Kumakhasimende uqobo, kufanele azi lapho sidinga ukusebenzisa khona okokusebenza nokuthi yimuphi umphumela esidinga ukuwuthola, futhi athole umakhi wezinsimbi oqeqeshiwe oncomela imishini efanelekayo yokusekela kuwe ngokusho kwendawo yokusebenzisa nezwe elisetshenziswayo.
Njengamanje, amanani embonini yokuvikela yasekhaya asesexakile. Ngokuntshontsha imishayo nokushintsha okuthunyelwe, usebenzisa i-fakes, ukunciphisa amandla, i-propaganda yamanga, njll. Kungcono ukhethe abakhiqizi abangochwepheshe abanganikeza ngezinsizakalo zesikhathi eside emva kokuthengisa. Ukuthengisa kwesinye isikhathi kungokwengqondo, hhayi imikhiqizo. Inani langaphakathi ngokwalo.
Isikhathi Iposi: Oct-17-2020